Malware inoenderera ichikura paIOS | IPhone nhau
Pablo Aparicio | | IPhone Kuchengetedza
ari vagadziri ve hutachiona uye malware vanowanzovaka software yavo nekutarisa pane inonyanya kushandiswa sisitimu yekushandisa. Zvinoratidzika zvine musoro, nekuti kana iwe uchida kuve nemikana yakawanda, zvakanakira "kunanga" pane boka revanhu uye kwete kune vanhu vashoma. Windows yagara iri (uye ichave iri pane masisitimu edesktop) sisitimu yekushandira yakasarudzika yemhando idzi dzematsotsi uye pane masystem anoshanda eanosarudza sisitimu yekushandisa iri Android. Zvakadaro, iOS iri kukura mumugove wemusika uye iyo "yakanaka" hutachiona uye vanyori ve malware vari kuwedzera kutarisa kuApple anoshanda masisitimu.
Mhosva dzakawanikwa dzekushandisa dzakabira data rakaomarara kubva kune vamwe vashandisi. Hazvina kujairika kuti izvi zvikumbiro zvisvike kuApp Store, asi iyo XcodegGhost kesi inoratidza kuti vashandisi veApple havagone kuve 100% kudzikama futi. Kuti uwanezve kuvimba kwevashandisi, Apple iri kutogadzirira chirongwa chayo chekudzivirira zvinopesana nemhando dzedambudziko.
Iyi Anti-Malware chirongwa chekudzivirira chichatanga na tighter application control, apo avo vane basa rekutsigira Anwendung vanozotarisa sosi kodhi yechishandiso uyezve voongorora kana rekunze SDK rakabatanidzwa. Mune mamwe mazwi, zvinotaridzika zvakadzama mumatumbu echero application isati yatsikiswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » IPhone Kuchengetedza » Malware inoenderera ichikura paIOS, asi Apple yatove nehurongwa hwekuimisa
Zvinozivikanwa kuti x brand fans havazive zvavanotaura, ivo vanongotenga
@ Antifanboys… Iwe hauzive chaizvo zvauri kutaura… Nick uye makomendi ako anoratidza imwe shanje uye pamusoro pezvese zvakasarudzika zvekusaziva… Ehe iOS ndiyo yakachengeteka kwazvo smartphone system !!! Asi izvi hazvireve kuti ndeye 100% yakachengeteka asi ini ndinoda iOS iyo 90% yakachengeteka kupfuura Android iyo iri 10% yakachengeteka ndiwo musiyano watiri kutaura nezvazvo ... Zvinosuruvarisa kuti hapana 100% yakachengeteka. Zvakanaka kana ... Kusaziva kwako kuri muzana iroro kanenge ... Kana peji rino richikupa nyadzi, unowana sei kuverenga nhau dzavo ??? Hahaha dhiyabhorosi murombo, zvirokwazvo ane Android ye € 99 nekuti haakwanise kuverenga iyo iPhone kana yechipiri ruoko ... Kana pane kutsoropodza iwe shandisa nguva yako mukufunda kana kushanda iwe unogona kutenga iyo iPhone yezviroto zvako !!! Asi chii chiripo… Kune vakomana vakaita sewe zviri nyore kugara pamba wakarara pasofa uchipomera nyika nhamo dzako !!! Saka inoenda Spain !!!
iyo yakachengeteka system iblackberry kana uchizvida kana kwete, kana zvisiri bvunza vezvematongerwo enyika vakakosha uye mapurezidhendi eAmerica ,,, kuti vaone zvavanazvo parunhare.
saka usaende jongwe neIOS, nekuti zvese zviri zviviri iOS neApple zvine malware kana uchizvida kana kwete!
Hahaha… that was before !!! Sezvo iri padhuze nekubhuroka, ivo vanotengesa kodhi yavo kuhurumende zhinji ... zvakare Black Berry ine OS iyo inonyadzisa, haigone kuenzaniswa neIOS kana Android! saka chero munhu anoita OS yakachengeteka !!! hahaha mwana tengesa iyo Blak Berry yaunayo uye utenge chaiyo SmatPhone !!! hahaha Chii chaunoteerera !!!
IOS ine mavhairasi nekuda kwekuparadzwa kwejere, iOS yemuno haina ma virus kunze kwekunge iwe ukapinda peji kana kurodha pasi pirated mafomu ekuti usabhadhara mari inorema euro ... Android ndeye yakavhurika OS uye iri panjodzi huru ...
Zvakare kana iwe usingade iro peji, enda, usabata mabhora ako, kana usingaifarire, unoenda uye unokanganwa zvandakadzidza uye usingaone kuti yakasarudzika sei ...
Ndingapika kuti ndakaverenga kare kare kuti Barack Obama akatenga iPhone 6 ... handizive kana ichokwadi asi ndakaiverenga ...
Uine iyo iOS ichagara yakachengeteka kwazvo kwete 100% asi inopfuura android yakachengeteka !!! Iyo jailbroken iOS iri panjodzi huru kupfuura yemuno !!
Siri ari kufambidzana zvirinani neApple Music paApple TV